वैदेशिक व्यापारमा दैनिक दुई अर्ब ६५ करोड ८३ लाख घाटा ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
वैदेशिक व्यापारमा दैनिक दुई अर्ब ६५ करोड ८३ लाख घाटा !
२६ पुस ,काठमाडौं ।वैदेशिक व्यापारमा मुलुकलाई दैनिक दुई अर्ब ६५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच महिना (साउन -मंसिर )को तथ्यांकले व्यापार घाटा उछालिएको देखाएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा दैनिक व्यापार घाटा दुई अर्ब ३४ करोड थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा व्यापार घाटा तीन खर्ब ९८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको यही समयमा व्यापार घाटा तीन खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड थियो। मुलुकको निर्यातभन्दा आयात उच्च वृद्धि भएपछि व्यापारको खाडल बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ। यो वर्षभरि व्यापार घाटा १० खर्ब हाराहारीमा पुग्ने प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ।
विभागका अनुसार पाँच महिनामा चार खर्ब ६६ अर्ब २० करोडको कुल व्यापार ९आयात(निर्यात० भएको छ। कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२।८ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ७।२ प्रतिशत छ। गत वर्षको यही समयमा चार खर्ब १२ अर्ब ८८ करोडको व्यापार भएको थियो। बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहसँगै नेपालीमा किनेर खाने प्रवृत्ति विकास भएपछि आयात बर्सेनि उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट दुई खर्ब ८२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको छ। नेपालबाट १८ अर्ब १५ करोडको वस्तु भारततर्फ निर्यात भएको छ। पाँच महिनामा भारतसँगको व्यापार घाटा दुई खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। चीनबाट ५४ अर्ब, अर्जेन्टिनाबाट ५ अर्ब ७१ करोड, थाइल्यान्डबाट पाँच अर्ब नौ करोड, भियतनाम र साउदी अरेबियाबाट चार÷चार अर्ब मूल्यको वस्तु आयात गरिएको छ। नेपालबाट अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु निर्यात हुने मुलुकमा भारतसहित चीन, अमेरिका, जर्मनी, टर्की, बेलायत प्रमुख मुलुक रहेका छन्।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी वस्तु वीरगन्ज भन्सारबाट आयात भएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सबैभन्दा बढी वस्तु निर्यात भएको छ। वीरगन्जबाट एक खर्ब ४५ अर्ब चार करोडको वस्तु आयात भएको छ। यो कुल आयातको ३३।५४ प्रतिशत हुन आउँछ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट १० अर्बको वस्तु विभिन्न मुलुकमा पुगेको छ। यो कुल निर्यातको १७।५८ प्रतिशत हिस्सा हो।